akwa ịgbado ọkụ | induction igwe na-emepụta igwe | ihe ndozi oku
mgbatị ọkụ dị elu
Igwe na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ / RF PVC maka ịgbado ọkụ plastik, wdg. High Frequency Welding, nke a maara dị ka Radio Frequency (RF) ma ọ bụ ịgbado ọkụ na Dielectric, bụ usoro nke ijikọta ihe ọnụ site na itinye ike ọkụ redio na mpaghara iji sonye. Weld nke nwere ike ịdị ike dị ka ihe ndị mbụ. HF ịgbado ọkụ na-adabere… GỤKWUO
Categories Technologies Tags elu ugboro, elu ugboro ịkwanyere ịgbado ọkụ, elu ugboro welder, mgbatị ọkụ dị elu, Inggbado ọkụ dị elu oge dị elu, Mgbado ọkụ redio, RF, Ngwado ọkụ RF, RF ịgbado ọkụ igwe, Plastic ịgbado ọkụ plastic
Kedu ihe mgbakwunye ọkụ?
Site na ịgbado ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ. Ọsọ na izi ezi
nke ịgbado ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ịgbado ọkụ nke ọkpọkọ na ọkpọkọ. N'ime usoro a, ọkpọkọ na-agafe ọsọ ọsọ na ọsọ ọsọ. Ka ha na-eme nke a, a na-eme ka akụkụ ha kpụ ọkụ n'ọnụ wee kpakọkọta ọnụ iji mepụta ọnya welding longitudinal. Ngwunye ọkụ na-adaba adaba karịsịa maka imepụta nnukwu olu. Enwekwara ike ịkwado ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ndị isi kọntaktị, na-atụgharị ha
usoro nhazi abuo abua.
Akpado ọkụ na-agbanye ọkụ na-arụ ọrụ na-akpaghị aka bụ usoro a pụrụ ịdabere na ya, nke dị elu. Ike oriri dị elu na arụmọrụ dị elu nke usoro DAWEI Induction ịgbado ọkụ na-ebelata ụgwọ. Njikwa ikike ha na ikwughachi ihe na-ebelata. Usoro anyị na-agbanwe-akpaka ibu kenha ana achi achi zuru mmepụta ike gafee a dịgasị iche iche nke tube nha. Obere akara ụkwụ ha na-eme ka ọ dịrị ha mfe ijikọta ma ọ bụ weghachite n'ime usoro mmepụta.
A na-eji ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ọkpọkọ na ọkpọkọ maka ịgbado ọkụ ogologo nke igwe anaghị agba (magnet na nke na-abụghị nke magnetik), aluminom, obere carbon na akwa dị ala (HSLA) na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Categories FAQ Tags mgbatị ọkụ dị elu, ntinye ntinye, usoro ntanye mmepụta, Mgbado ọkụ redio, ịgbado ọkụ, ịkwado akpụkpọ anụ, tubing welding